जनतालाई स्थानीय सरकारको महसुस गरायौं, अझै धेरै गर्न बाँकी छ : नगर प्रमुख थापा – Nepal Press
जनतालाई स्थानीय सरकारको महसुस गरायौं, अझै धेरै गर्न बाँकी छ : नगर प्रमुख थापा
२०७८ भदौ ६ गते १४:५९
भौगोलिक क्षेत्रफलका आधारमा अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिका नेपालकै ठूलोमध्येमा पर्दछ । तराईको जिल्लासँग सीमा जोडिएको यो नगरपालिकामा चुरे वन क्षेत्र धेरै छ ।
आफ्नो ५ वर्षे कार्यकालको अन्तिम बजेट ल्याइसकेको यो पालिकाले कसरी नागरिकको मन जित्न खोजेको छ ? अहिलेसम्म चुनावी प्रतिवद्धता के कति पूरा भए र बाँकी अवधिमा कति पूरा हुनेछन् ? नगर प्रमुख रेशम थापासँग नेपाल प्रेसका लागि रामप्रसाद आचार्यले गरेको कुराकानी ।
भूमिकास्थान नगरपालिकामा कोरोना संक्रमणको अवस्था कस्तो छ ?
यो नगरपालिकामा आवतजावतको हिसाबले मुख्य स्थान परेको हुँदा सक्रमणको दर अन्य स्थानीय तहमा भन्दा केही तल–माथि छ । संक्रमणलाई रोक्ने प्रयन्त हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो सयम संक्रमण तीव्र किसिमले बढेको छ ।
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि थप के–कस्ता प्रयास भइरहेका छन् ?
नगरपालिकाले नगरबासीको जीवनरक्षाका लागि सीमित स्रोेत साधनहरुलाई परिचालन गरिरहेको छ । नगर, वडा र टोलस्तरीय कोरोना भाइरस रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार समन्वय समितिलाई क्रियाशील बनाएका छौं ।
नगरपालिका भित्र रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई सक्रियतापूर्वक परिचालन गरेका छौ । मिडियामार्फत नागरिकहरुलाई सशक्तीकरण र चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं ।
लक्षण देखा परेका वडाका टोल बस्तीहरुमा एन्टीजेन परीक्षण मार्फत पहिचान गरेका छौ । कोरोनाका कारणले जिविकोपार्जन गर्न अप्ठ्यारो परेका नागरिकहरुलाई राहत वितरण गरेका छौं । संघीय सरकारको समन्वयमा सबै नागरिकहरुलाई खोपको सुनिश्चितता गर्न पहल गरेका छौं ।
चार वर्षको अवधिमा के–के काम गर्नुभयो ?
हामीले शुरुवातदेखि नै कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने योजना बनाएको थियौं । नागरिकको आर्थिक विकासका लागि कृषि र पशुतर्फ पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गरेका छौं ।
टनेलदेखि ठूला–ठूला कृषि तथा पशु फर्महरु खुलेका छन् । नगरपालिकाले अनुदान, प्रोत्साहन, साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषकहरुलाई व्यावसायिक कृषि पेसामा लाग्न प्रेरित गरेका छौं । कुखुरा, दुध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाइ निर्यात गर्ने लक्ष्य पूरा हुँदैछ ।
तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउने दिशातर्फ उन्मुख बनाइ कृषकलाई सहकारी समन्वय सहकार्यमा उत्पादन तथा आर्थिक क्रियाकलापलाई बृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने काम भएको छ ।
पूर्वाधारतर्फ सडकहरुको स्तरउन्नति गर्ने कार्य १० वडामा तीव्र किसिमले भइरहेको छ । ठूलाठूला खानेपानीका योजनाहरु सम्पन्न भएका छन् कतिपय हुने तयारीमा छन् । जसले गर्दा सरल र सहज रुपमा स्वच्छ खानेपानीको सुनिश्चिता गरिएको छ ।
८ वटा वडा कार्यालयहरु सम्पन्न हुने प्रक्रियामा छन् । सामाजिक विकासतर्फ विद्यालयका भवनहरु निर्माण भएका छन् । जनजागृति माविको नमूना विद्यालय भवन निर्माणका लागि बनेको करिब १ करोड ५० लाखको परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि बढेको छ ।
विद्यार्थी अनुपातमा अनुदान तथा दरबन्दी मिलानको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छांै भने खाली स्कुलमा एक शिक्षक एक क्लासको व्यबस्था गरेका छौं । युवाहरुलाई खेलकुद कार्यक्रम मार्फत प्रतिभाहरुलाई प्रस्फुटित हुने अवसर प्रदान गरेका छौं । प्रविधि हस्तान्तरण गरी व्यावसायिक बनाउने योजना बनाएका छौं । अतिविपन्न परिबारका घरका छानामुक्त बनाउने अभियान अन्तर्गत २ सय ५६ घर परिवारलाई जस्तापाता उपलब्ध गराइएको छ ।
साथै जनता आवास कार्यक्रममार्फत वडा नं ६ मा रहेका अतिविपन्त दलित परिवारलाई १३ वटा घर निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । बर्षात वा आगजानीको कारणले घरहरु भत्किएका नागरिकलाई आर्थिक राहत तथा अस्थायी बसोबासका लागि त्रिपाल उपलब्ध गराइएको छ ।
भूक्षय नियन्त्रण गर्न तारजाली उपलब्ध गराइएको छ । सुशासनतर्फ सार्वजनिक सुनुबाइ, ऐन कानून कार्यविधिहरुको निर्माण, हेल्प डेस्कसँगै विभिन्न सफ्टवेयर निर्माण वडास्तरबाट कर बुझाउने व्यवस्था गरेका छौं ।
चुनावी प्रतिवद्धता कति पूरा भएजस्तो लाग्छ ? के–के थिए प्रतिवद्धता ?
आफूले गरेका प्रतिवद्धता समय समयमा स्मरण गर्ने गरेको छु । निर्वाचनको समयमा भूमिकास्थान नगरपालिकालाई सुन्दर, समृद्ध नगरपालिका बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थिएँ । संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने चरणको पहिलो निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएकाले संस्थागत रुपमा कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाउँदै वडासम्म लैजाने, ऐन कानून, नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि निर्माण, सुशासन र पारदर्शी गर्ने, पूर्वाधारको क्षेत्रमा प्रत्येक वडामा जोड्ने मुख्य सडकको स्तरोन्नति, ग्राभेल र पक्की बनाउने, एकघर एकधारो खानेपानीको क्षेत्रमा पूर्ण सरसफाइमा लैजाने, कृषि र वायु क्षेत्रलाई जोड दिएर उत्पादनमूलक बनाइ रोजगारी सिर्जना गर्ने, पर्यटक क्षेत्रको पूर्वाधार विकास गरी आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने, मानव विकासको सूचाङ्कलाई वृद्धि गर्ने बचन दिएको थिएँ ।
त्यस्तै शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा सबैका लागि, शिक्षा समावेशी र गुणस्तर बनाउने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुलभ र सहज पहुँचको व्यवस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थिएँ । त्यसमध्ये धेरै प्रतिशत काम पूरा भएका छन् । केही प्रकृयामै छन् । बाँकी काम बाँकी समयमा पूरा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु ।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा महसुस गर्न पाए त नागरिकले ?
सिंहदरबारको अधिकार घर–नगरमा आएको महसुस गरेका छन् यहाँका नागरिकहरुले । हिजो ससाना योजना माग गर्न सिफारिस लिएर काठमाडौं धाउने प्रचलन थियो । पहुँचको भरमा योजना आउँने गर्दथ्यो भने अहिले वस्तीस्तरबाट जनताको व्यापक सहभागितामा योजना छनोट गर्ने, प्राथमिकीरण गर्ने, समस्या भएका स्थानका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने भएकोले सिंहदरबार गाउँ–नगरमा आएको पक्कै महसुस भएको छ ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि नागरिकले के पाए र कसरी काम भएको छ ?
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि नगरपालिकामा विकास निर्माणका काममा सबैसँग समन्वय र सहकार्यका साथ काम गरेका छौं । हामी जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र राजनीतिक दल सबै मिलेर काम गर्दै आएका छौं ।
स्थानीय सरकारको नेतृत्व लिएर काम गर्दा कस्ता चुनौती आइलागे ? कसरी सम्पादन गर्नुभयो ?
सिंहदरबारको अधिकार घरघरमा अर्थात् घरदैलो सरकारको रुपमा नागरिकहरुको बुझाइ भएकोले सानादेखि ठूलाठूला अपेक्षा नागरिकले स्थानीय सरकारसँग राखे । विकास निर्माण, रोजगार, अनुदान सहयोग, विपद् व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा आदिका सबै उनीहरुको अपेक्षाहरु पूरा गर्न सीमित स्रोतसाधन मुख्य चुनौतीका रुपमा देखिए । आम्दानीको सुनिश्चितता नभइ नागरिकका धेरै अपेक्षा पूर्णरुपमा पूरा गर्न नसकिएको यथार्थ हो ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच कसरी समन्वय गरेर काम गर्नुभयो ?
कर्मचारी र जनप्रतिनिधि फरक फरक जिम्मेवारीमा भएका कारण, फरक फरक प्रकृयाबाट आएका कारण पनि सबैको एउटै उद्देश्य नहुँदा समस्या देखिने रहेछ । हामीकहाँ धेरै ठूलो समस्या त आएन तर बीचबीचमा केही अफ्ठ्यारा आइरहे ।
लामो समयसम्म स्थानीय निकायमा आफैं मेयर, आफैं सचिवको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको कर्मचारी संयन्त्र परिवर्तित राज्यको संरचनामा काम गर्दा नमीठो अनुभूति गरेता पनि राजनीतिक परिवर्तनलाई वाध्यताले स्वीकानुपर्ने देखिन्छ ।
एउटा सामान्य जनताको त्याग, तपस्या, बलिदानले ल्याएको संघीयता लोकतन्त्रलाई सफल बनाउन लाग्नुपर्छ भन्ने भावनासहित जनप्रतिनिधि खटिनुपर्ने र कर्मचारीले पनि त्यसमा साथ दिए योजनाअनुसारका काम गर्न सहज हुने रहेछ ।
अन्तिम बजेट कस्तो ल्याउनुभयो ?
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रमबमोजिम ८० करोडको वार्षिक बजेट आएको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट जनअपेक्षाबमोजिम ल्याएका छौं ।
सिंगो जनप्रतिनिधिको टिम जनताकोे चाहना र भावनाबमोजिम काम गर्ने प्रतिबद्धता रहेकोले यो बजेट कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी संयन्त्र राजनीतिक दल, सञ्चारकर्मी र आमनागरिकबाट सकारात्मक रुपले कार्यान्वयन गर्न सहयोग हुने विश्वास लिएको छुु ।
पालिकामा रोजगारी व्यवस्थापनका लागि के योजना बनेका छन् ?
नगरपालिकाले विदेशतिर जाने होइन, कृषि, पशु, सहकारीमार्फत् गाउँमै बस्ने वातावरण बनाउन अनेक प्रयास गरेको छ । त्यसका लागि नगरपालिकाबाट हुनसक्ने सबै सहयोग गर्न तयार छौं ।
प्रकाशित: २०७८ भदौ ६ गते १४:५९
One thought on “जनतालाई स्थानीय सरकारको महसुस गरायौं, अझै धेरै गर्न बाँकी छ : नगर प्रमुख थापा”
madhav panthi says:
राम प्रसाद सरकाे समाचार राम्राे र पूर्ण लाग्छ ।
वडाध्यक्ष फुयालको अगुवाइमा एम्बुलेन्स खरिदः सुत्केरीलाई निशुल्क सेवा, वडाबासीलाई आधा छुट
‘छोरी बचाऔं, छोरी पढाऔं’ अभियान सार्थक भएको छ’
पुनर्बहाली भएकी उपप्रमुखको गुनासोः नगरप्रमुखले स्वीकार्नै गाह्रो माने, अधिकार पाइएन
नवीन प्रयोग गर्दै धरानका वडाध्यक्ष: सार्वजनिकस्थलमा खुला व्यायामशाला, स्थानीय आकर्षित
वीरेन्द्रनगरको नयाँ बजेट शिक्षा, स्वास्थ्य र स्वरोजगारमा केन्द्रीत हुने : उपप्रमुख ढकाल
मुसिकोटको मेयरका प्रतिबद्धता : के-के पूरा, के-के अधुरा ?
वीरेन्द्रनगरका वडाध्यक्ष भन्छन्- प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गरेर भए पनि वडावासीको खर्च टार्छु
संक्रमितको विश्वास जित्दै बुटवल उपमहानगर, नगरप्रमुखको प्रभावकारी सक्रियता